We.com.mm - သည်းသည်းလှုပ်ချစ်မပြတတ်တဲ့ စုံတွဲတွေ ဘာလို့ပိုမြဲကြတာလဲ?
အချစ်ရေးမှာ တချို့က လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် ချစ်တတ်ကြတယ်၊ တချို့က အရူးအမူးချစ်ကြတယ်၊ တချို့က အချစ်ကို ထုတ်မပြကြဘူး။ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ သဝန်တိုပြမှ တကယ်ချစ်တယ်၊ သည်းသည်းလှုပ်ပြမှ တကယ် ချစ်တယ်လို့ ယူဆတာဟာ အမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ပါဘူး။ အရူးအမူးအချစ်ဆိုတာလည်း ကောက်ရိုးမီးလို ဟုန်းခနဲ တောက်လောင်ပြီးမှ ခဏလေးငြိမ်းသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချစ်ပုံချစ်နည်း အမျိုးမျိုးထဲကမှ ရူးရူးမူးမူး၊ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြကြတဲ့ စုံတွဲတွေထက်စာရင် အချစ်ကို အများရှေ့ထုတ်မပြလေ့မရှိဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးဆေးဆေးချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေက ပိုကောင်းသလို ပိုလည်း မြဲတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
၁။ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အချစ်တိုင်း ပျင်းစရာကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး
တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ အချစ်မှာ ရန်ဖြစ်တာတွေ၊ မနာလိုဝန်တိုဖြစ်တာတွေနဲ့ စိတ်အခန့်မသင့်တာတွေ မပါဝင် တတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုအရာတွေမရှိတာကြောင့် အများအမြင်မှာ ပျင်းစရာကောင်းသလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အများရှေ့မှာသည်းသည်းလှုပ်မပြဘဲ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ တိတ်တဆိတ်ချစ်ကြခြင်းက လုံခြုံ စိတ်ချရခြင်းနဲ့ စိတ်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ခြင်းတို့ကို ခံစားရစေပါတယ်။ စုံတွဲတွေမှာ အစပိုင်း သည်းသည်း လှုပ်ချစ်ပြပြီး နောက်ပိုင်းမှ သွေးအေးသွားတာမျိုး တွေ့ရတာများပါတယ်။ သည်းသည်းမလှုပ်ပြဘဲ အေးအေး ဆေးဆေးချစ်နေတာမျိုးက ပြောင်းလဲမှုသိပ်မရှိလှဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းလေးနဲ့ ရေရှည်ခိုင်မြဲနေကြတာမျိုးပါ။
၂။ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အချစ်က လုံခြုံနွေးထွေးမှုကို ရစေပါတယ်
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုရင်လည်း သည်းသည်းလှုပ်ပြတာမရှိ၊ ရိုတာတွေလည်းမရှိဘဲ အေးဆေး တည်ငြိမ်စွာ တိတ်တဆိတ်ပဲချစ်တတ်သူတွေဟာ ပိုပြီးခိုင်မြဲကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီလိုစုံတွဲတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘောင်ကျော်အောင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာမျိုး၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ထိခိုက်ခံစားရ အောင် စကားများရန်ဖြစ်တာမျိုး၊ ငြင်းခုံကြတာမျိုး သိပ်မရှိတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ခုစရာ တွေ၊ တေးထားစရာတွေလည်း မရှိကြပါဘူး။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ အစိုင်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ရှိမနေခြင်းက နှလုံးသားကို လုံခြုံနွေးထွေးမှု ပိုရစေပါတယ်။
၃။ ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ အချစ်တစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး
တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ အချစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြည့်အဝယုံကြည်မှု ရှိဖို့နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်လည်း နာကျင် ခံစားရအောင် မလုပ်ကြပါဘူး။ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အချစ်မှာ ပွင့်လင်းမှု၊ အလေးထားမှု၊ လေးစားမှု၊ ယုံကြည် မှု၊ အပြန်အလှန်အားပေးဖေးမမှုနဲ့ နားလည်မှုတို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ တည်ငြိမ်တဲ့ချစ်ခြင်းကလည်း Romantic ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အရူးအမူးချစ်ပြမှ၊ သည်းသည်းလှုပ်ပြမှ ဒါမှမဟုတ် Romantic ဖြစ်အောင် သပ်သပ်လုပ်မှ Ro တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြည့်အဝယုံကြည်နားလည်ပြီး တည်ငြိမ်စွာ ချစ်ခြင်းကလည်း Romantic ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းစည်းတွေ ချောကလက်တွေထက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လက်လေးဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းက အများကြီးပိုပြီး နွေးထွေးမှုရှိပါတယ်။
၅။ တည်ငြိမ်အေးဆေးနေခြင်းကလည်း တစ်မျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်
အခုခေတ်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ချစ်ပြကြတာတွေ အရမ်းများလာပါတယ်။ တကယ့်ရင်ထဲက ချစ်ခြင်း ထက် လူမြင်ကောင်းအောင် အပေါ်ယံပကာသနတွေ များလာကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခြင်း ကို နှစ်ယောက်တည်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဖြစ် တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းပြီး အများရှေ့မှာ သည်းသည်းမလှုပ် ပြတဲ့ ချစ်ခြင်းက ပေါ်ပင်တွေထက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်မျိုး ကောင်းပါတယ်။
တည်မြဲတဲ့ Relationship တစ်ခုဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ…
Bella Hadid နဲ့ Selena Gomez တို့ ပတ်သက်မှုက ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ဦးမလဲ
ပိုးတွေ့သူနာပြုနှစ်ဦးထံမှ ဖုန်းခိုးသွားသူကို Qဝင်ရန် ဆရာဝန်များပန်ကြား